New York မှာ ဘယ်သူမှ မမျှော်လင့်ဘဲ အမေရိကန်ဒကာလေးတစ်ယောက်ကို တရား ဟောဖြစ်ပါတယ်။ New York လေဆိပ်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က ဦးဇင်းကို လာမေးတယ် – အရှင်ဘုရားတဲ့၊ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ သေရင် ဘာဖြစ်မလဲ ဘယ်လို ယုံကြည်ကြလဲတဲ့။
ဦးဇင်းက ပြောပြတယ် ဒီဘဝမှာ သေရင် နောက်ဘဝမှာ လူဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ တိရစ္ဆာန် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ နတ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ ဘုံ ၃၁ ဘုံမှ ၁ ဘုံမှာ ဘဝရမှာပါလို့ ပြောထားပါတယ်။ (ကံအတိုင်း ဖြစ်တယ်လို့ ဦးဇင်းက ဒီမှာ မပြောသင့်သေးပါဘူး။
ဒီမှာ သူက ကံ၊ ကုသိုလ် မမေးပါဘူး။ ဆက်မေးရင် ဦးဇင်း ဖြေရတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေက သေရင် တစ်ခု ရှိ/မရှိ အဓိက သိချင်တာ။နောက်ဘဝ ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်မှ ဘယ်လို၊ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။)
အဲ့ဒီမှာ သူ မေးတယ်။ ဒီလို နောက်ဘဝရမယ်ဆိုတာ သာဓက ရှိပါသလား၊ သက်သေ ပြနိုင်မလားတဲ့။ ဦးဇင်းက ဖြေတယ်- ဟုတ်ပါတယ်။ Ian Stevenson နဲ့ Jim Tucker ဆိုတဲ့ အမေရိကန် ပရောဖက်ဆာ ပညာရှင်တွေက အရင်ဘဝကိုမှတ်မိတဲ့ကလေးတွေဆီ သွားပြီး စုံစမ်းထားကြပါတယ်။
စာအုပ်တွေလည်း ထုတ်ဝေထားပါတယ်။ ကလေးတွေကလည်း အရင်ဘဝမှ မှတ်မိတဲ့အချက်အလက်တွေကို မိဘ စသည် ဘယ်သူမှ မသိခဲ့ပါဘူး မပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ အရင်ဘဝမှာ သူတို့က ဘယ်နာမည်၊ ဘယ်အိမ်၊ ဘယ်အတွေ့အကြုံရှိခဲ့လဲလို့ မှတ်မိကြပါတယ်။
မှတ်တမ်း ရုံး (archive) တွေမှာ ကလေးတွေ ပြောပြထားတဲ့အချက်အလက်အတိုင်း အရင်ဘဝမှ ဘယ်မှာ၊ ဘယ်လို၊ ဘယ် နာမည်၊ ဘယ် အရည်အချင်းစသည့် အချက်အလက် အတိအကျ
အမျိုးစုံကို ကလေးက ပြောပြထားတဲ့အတိုင်း မှတ်တမ်းစာအုပ်တွေမှ စစ်လို့ရပါတယ်၊ စစ်ပြီးရင် ကလေးတွေက ပြောပြထားတဲ့ အရင်ဘဝက လူတွေကိုလည်း တွေ့ရတယ်၊ အားလုံးက အတိအကျ မှန်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ အဲ့လို ကလေးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
အဲဒီမှ ဦးဇင်းတို့ သွားရမယ်ဆိုတော့ ဒကာလေးက လျှောက်တယ် – သြော်…. ဒီနေ့ ဗဟုသုတ ရသွားပြီ… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့။
ဆရာတော်၊ ဆရာလေး၊ ဒကာ၊ ဒကာမများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ(ခဏလေး ယူအက်စ် USA မှာ) ချက်ခ် အရှင် သရဏ
credit Ashin Sarana
New York မှာ ဘယျသူမှ မမြှျောလငျ့ဘဲ အမရေိကနျဒကာလေးတဈယောကျကို တရား ဟောဖွဈပါတယျ။ New York လဆေိပျဝနျထမျးတဈယောကျက ဦးဇငျးကို လာမေးတယျ – အရှငျဘုရားတဲ့၊ ဗုဒ်ဓဘာသာမှာ သရေငျ ဘာဖွဈမလဲ ဘယျလို ယုံကွညျကွလဲတဲ့။
ဦးဇငျးက ပွောပွတယျ ဒီဘဝမှာ သရေငျ နောကျဘဝမှာ လူဖွဈနိုငျပါတယျ၊ တိရစ်ဆာနျ ဖွဈနိုငျပါတယျ၊ နတျ ဖွဈနိုငျပါတယျ၊ ဘုံ ၃၁ ဘုံမှ ၁ ဘုံမှာ ဘဝရမှာပါလို့ ပွောထားပါတယျ။ (ကံအတိုငျး ဖွဈတယျလို့ ဦးဇငျးက ဒီမှာ မပွောသငျ့သေးပါဘူး။
ဒီမှာ သူက ကံ၊ ကုသိုလျ မမေးပါဘူး။ ဆကျမေးရငျ ဦးဇငျး ဖွရေတယျ။ နိုငျငံခွားသားတှကေ သရေငျ တဈခု ရှိ/မရှိ အဓိက သိခငျြတာ။နောကျဘဝ ရှိတယျလို့ ယုံကွညျမှ ဘယျလို၊ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတာကို စိတျဝငျစားပါတယျ။)
အဲ့ဒီမှာ သူ မေးတယျ။ ဒီလို နောကျဘဝရမယျဆိုတာ သာဓက ရှိပါသလား၊ သကျသေ ပွနိုငျမလားတဲ့။ ဦးဇငျးက ဖွတေယျ- ဟုတျပါတယျ။ Ian Stevenson နဲ့ Jim Tucker ဆိုတဲ့ အမရေိကနျ ပရောဖကျဆာ ပညာရှငျတှကေ အရငျဘဝကိုမှတျမိတဲ့ကလေးတှဆေီ သှားပွီး စုံစမျးထားကွပါတယျ။
စာအုပျတှလေညျး ထုတျဝထေားပါတယျ။ ကလေးတှကေလညျး အရငျဘဝမှ မှတျမိတဲ့အခကျြအလကျတှကေို မိဘ စသညျ ဘယျသူမှ မသိခဲ့ပါဘူး မပွောနိုငျခဲ့ဘူး။ အရငျဘဝမှာ သူတို့က ဘယျနာမညျ၊ ဘယျအိမျ၊ ဘယျအတှအေ့ကွုံရှိခဲ့လဲလို့ မှတျမိကွပါတယျ။
မှတျတမျး ရုံး (archive) တှမှော ကလေးတှေ ပွောပွထားတဲ့အခကျြအလကျအတိုငျး အရငျဘဝမှ ဘယျမှာ၊ ဘယျလို၊ ဘယျ နာမညျ၊ ဘယျ အရညျအခငျြးစသညျ့ အခကျြအလကျ
အတိအကြ အမြိုးစုံကို ကလေးက ပွောပွထားတဲ့အတိုငျး မှတျတမျးစာအုပျတှမှေ စဈလို့ရပါတယျ၊ စဈပွီးရငျ ကလေးတှကေ ပွောပွထားတဲ့ အရငျဘဝက လူတှကေိုလညျး တှရေ့တယျ၊ အားလုံးက အတိအကြ မှနျတယျလို့လညျး သိရပါတယျ။ အဲ့လို ကလေးတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။
အဲဒီမှ ဦးဇငျးတို့ သှားရမယျဆိုတော့ ဒကာလေးက လြှောကျတယျ – သွျော…. ဒီနေ့ ဗဟုသုတ ရသှားပွီ… ကြေးဇူးတငျပါတယျတဲ့။
ဆရာတျော၊ ဆရာလေး၊ ဒကာ၊ ဒကာမမြားအားလုံးကနျြးမာခမျြးသာကွပါစေ(ခဏလေး ယူအကျဈ USA မှာ) ခကျြချ အရှငျ သရဏ
အရှင်ဘုရားတဲ့၊ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ သေရင် ဘာဖြစ်မလဲ ဘယ်လို ...